Taratra fanamando vovoka hafakely
Ny vovoka famonoana vovoka avo dia vita amin'ny vatosoa matevina vita amin'ny vy matevina tsapa, ny vy vita amin'ny aluminiana vita amin'ny vy vita amin'ny vy sy ny vy tsy miova vony.
Ny vatan-tsolika fanivanan-diloilo avo dia manana ny mampiavaka ny porosity avo, ny loto mahery izay mitazona ny fahafaha-manao, ny fotoam-panompoana lava ary afaka ampiasaina tsy tapaka amin'ny mari-pana avo indrindra amin'ny 350-800 degre. Ny fahamarinan'ny filtration misy dia 3μ-200μ, ary ny refy ivelany dia azo atao arakaraka ny zavatra takian'ny mpampiasa.
Lisitry ny fampiharana:
Natao amin'ny fanivanana entona hafanana avo sy haino aman-jery hafa, izay be mpampiasa amin'ny fikosoham-bary, zavamaniry herinaratra, zavamaniry simenitra, entona voajanahary ary indostria hafa. Izy io dia mahasolo toerana ireo fitaovana fanesorana vovoka hafa.
Sivana vita amin'ny vovoka
Ny fitaovana sivin'ny singa fanivanana vita amin'ny foza dia manaiky ny dimy sosona vita amin'ny savaivony. Ny vatan-jiro vita amin'ny lamba dimy vita amin'ny kofehy vita amin'ny dimy sosona dia vy vita amin'ny vy matevina varahina dimy amin'ny alàlan'ny superposition sy ny fahamasinana vakoka. Ny singa an'ny sivana vita amin'ny singa sivana dia manana ny toetran'ny fanoherana ny korosi mahery, ny fahazoana aina tsara, ny tanjaka avo, ny fanadiovana mora ary ny fanadiovana ny lamosina, ny fampitandrahana ny sivana, ny fitaovana fanadiovana madio sy ny fahadiovana, ary tsy misy fianjerana amin'ny efijery, sns.
Nahatsapa ny sivana
Ny singa fanivanana miforitra amin'ny tsapan'ny fiotazana dia vita amin'ny fibre vy matevina taorian'ny nanodinana azy. Izy io dia misy ny toetran'ny porosity avo, ny fahazoana aina tsara, ny tanjaky ny hery handotoana ny fandotoana, ny fanoherana ny refy, ny fanoherana ny hafanana, ny ny serivisy maharitra ary ny fampiasana azy imbetsaka.
Ampiasaina indrindra amin'ny filtration sy ny fanadiovana ny polimisera isan-karazany ao amin'ny tontolon'ny fibre simika sy ny sarimihetsika; ny fifandroritana ny maripana avo sy ny rano manapoizina eo amin'ny sehatry ny indostrian'ny solika sy ny simika; ny sivana fametahana ny menaka hidiran'ny hydraulic isan-karazany sy ny menaka mihosotra amin'ny fitaovana mekanika; ny fifandroritana ny ranoka indostrialy toy ny fanafody, ny biolojia ary ny zava-pisotro; ny vovoka manivana ny slurry menaka mavesatra any amin'ny refineries.
Ny tsindry famolavolana: 0.6 ～ 2.5MPa
Hafanana endrika: 480 ℃
Fahamarin-sivana: 1-200 μ M
Alefaso ny baoritra faniviana rano
904L ny baoritra misy ny 904L vita amin'ny takelaka vita amin'ny 904L ary fantsom-tariby multilayer 904L rehefa avy nanota na multilayer 904L tariby tariby taorian'ny nanodikodinana, ary vita vita amin'ny fanodinana fametahana avo lenta. Azo atao araka ny tanjona sy ny tontolo iainana io. Fiadiana fanoherana tsara, fanoherana tsara amin'ny tsy asidra oksidroana toy ny asidra solifara, asidra asidra, asidra asidra ary asidra phosphorika, fanoherana tsara amin'ny famoanana ny haingan'ny atsy klôneida tsy miandalana, ary ny fanoherana tsara ny hajan'ny crevice sy ny fihenan'ny adin-tsaina. Izy io dia mety amin'ny asidra solifara asongadiny isan-karazany ao ambanin'ny 70 ℃, ary afaka manohitra ny fifantohana rehetra sy ny mari-pana amin'ny asidra asidra ao ambanin'ny tsindry mahazatra, ary koa ny fanoherana ny fanoherana ny asan'ny ranoka asidra asidra sy asidra asidra. Izy io dia manana votoaty kromium avo ary afa-po amin'ny nickel. Ny fametrahana ny varahina dia mahatonga azy hanana fanoherana asidra matanjaka, indrindra ny fanoherana avo amin'ny havoana klorida manelanelana sy ny fanamafisana ny fihenan'ny adin-tsaina. Tsy mora ny mipoitra vatolampy sy lozam-pifamoivoizana. Ny fanoherany amin'ny pitting dia somary tsara kokoa noho ny mari-pahaizana vy hafa. Izy io dia afaka mora foana sy azo apetraka ary azo ampiasaina amin'ny fanerena.
Ny vovoka metaly sintered
Ny singa mifangaro vy vita amin'ny sivana sinter vita amin'ny vy vita amin'ny vy vita amin'ny vy vita amin'ny bobongolo, vita amin'ny mari-pana avo ary miorim-paka. Izy io dia manana tombony amin'ny tanjaky mekanika avo, fanoherana ny hafanana, ny fanoherana tsara, ny fizarana pirazom-bolo mitovy habe, ny fikojakojana ny rivotra, ny fanadiovana sy ny fananganana indray, ny fanodinana mekanika ny milina lasantsy, sns. azo atao ny mahitsy amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny haben'ny sombin-javatra sy ny lafiny teknolojia amin'ny vovony. Noho ny tombony azo avy amin'ny fitaovana miiba amin'ny vovoka metaly vy, ny vokatra toy izany dia ampiasaina betsaka amin'ny famerenan'ny katalisma, filtrana avy amin'ny entona sy ny fisarahana eo amin'ny sehatry ny indostria simika, fanafody, zava-pisotro, sakafo, metallurgie, solika, fanafody fiarovana ny tontolo iainana, sns.; fanesorana vovoka, fitrandrahana, fanesorana solika ny gazy isan-karazany sy setroka; fihenan'ny tabataba, famoretana, lelafo, sns
Kitapo fanosiham-boalobaka nanala harona tariby
Ny fanoratana ny takelaka nanivana ny takelaka vita amin'ny vy vita amin'ny vy manosika sy ny vovon-tariby maro manasaraka amin'ny alàlan'ny superposition, manapaka ary manamboatra rehefa avy manota ny banga. Ny toetra misy ny fanoherana ny korosi mahery, ny fahazoana tsara, ny hery avo, ny fanadiovana ary ny fanadiovana miverina, ny fametrahana ny marina tsara, ny sivana fanadiovana, ary tsy misy fianjerana.
Stainless Steel Wire Mesh dia malaza amin'ny vokatra sivana toy ny fantsona fanohanana ary indraindray ampiasaina izany mivantana toy ny fantsona sivana sy cylinder ho an'ny indostria sasany. Tany ambonin`ny birao dia tsotra, madio ary tsy misy seta. Manolotra fantson-drano misy rano izahay hanohanana ny haino aman-jery amin'ny fanamboarana singa sivana isan-karazany.